Itreyila ye _50 Shades Freed_. I-cinematographic trilogy iyavala. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Izaziso, Inoveli, Inoveli yothando
Qhubeka, andikazifundi ezinye zeencwadi kuba ngokunyanisekileyo andinakudlula kwiphepha lama-50 ukufaneleka kwe impumelelo yehlabathi iphumelele kokubini kubafundi nakubabukeli, nangona le yokugqibela inokuba iyafana. Ukufezekiswa kwe- UEl James Ngokuqinisekileyo kukuzimela ngaphandle kwezimvo ezininzi eziphikisanayo malunga neencwadi kunye neemovie.
Ngoku ingenisiwe erhuqwayo I-50 shades ikhululiwe evala i-cinematographic trilogy kwaye iya kukhutshwa kwinyanga ezayo ka Fe bruwari. Ndenza uphononongo kwinto ekhoyo neza kuqhubeka ukuphawula ngayo ukulungelelaniswa kwefilimu yezi zihloko zithengise ngaphezulu kwe- Iikopi ezizizigidi ezingama-150 kumhlaba jikelele. Gcina inkwenkwezi kuyo UDakota Johnson y UJamie Dornan.
Kwaye, okomzuzwana, oko kulungile ngoku yinto eqhelekileyo yokucinga Ingubo yomtshato ka-Anastasia Steele emtshatweni wakhe noMnumzana Grey. Okanye ubuncinci kunjalo eyona nto ibalaseleyo kwinxalenye elungileyo yezihloko kumnatha.
Kubonakala ngathi i-aesthetics kunye neyona nkcukacha zininzi yale trilogy iqhubeka nokuma ngaphezulu kwemvelaphi yabo okanye ibali. Kwaye kubonakala ngathi luhlobo Inguquko kwisini nayo ihlanjululwe kuloo mfanekiso ungathandabuzekiyo odidi ekhethwe ukuba iphumeze ukuvalwa kokulungiswa.
Kwakukuphela kokuphela masithi eziqhelekileyo leyo yaphazamisa abo babebalaselise inqaku lamanqaku ezesondo «Ayiqhelekanga» kuncwadi oluqhelekileyo lwezothando Utyiwa luluntu ngokubanzi. Kodwa abona bathandi be-saga, abalinganiswa, ukuseta kunye necebo ngokungathandabuzekiyo baya kuqhubeka nokuzonwabisa ngokuzinikela.
1 I-50 shades zegrey
2 50 shades emnyama
3 I-50 shades ikhululiwe
4 Ngaba siya kuyibona?
I-50 shades zegrey
Ipapashwe ngonyaka 2011, ibingu-a imeko yoncwadi oko kuqhubekile nokugcinwa. Wahlala e Seattle, sisixhobo sokuqala setrilogy exelela ubudlelwane be uphumelele nje yeYunivesithi, UAnastasia Steele, Kunye nosomashishini osakhulayo Ngwevu yamaKristu.
Su impumelelo okanye intsha: ukwazisa kwiincoko zencwadana yothando ngokucacileyo imifanekiso engamanyala ngezinto ze ebukhobokeni, la lwakhiwo kunye nokungeniswa kunye mzwimzi. Kodwa la magama abandakanya amanqaku amaninzi kunye needigri njengoko umntu efuna.
50 shades emnyama
Anastasia ugqiba ukuba ahlukane Gray Phambi koxinzelelo lweefom ezinolwalamano lwabo olunobungqongqo kunye nayo mnyama mfihlelo Usomashishini owayengcungcutheka. Kodwa umnqweno wakho kuye akayeki kwaye akanako ukumelana nokubuyela kuye. Nangona kunjalo, uAna uya kwazi ngakumbi malunga nexesha elidlulileyo. Ngaphezulu, kufuneka ajongane nomsindo kunye nomona wabasetyhini abaza ngaphambili.
I-50 shades ikhululiwe
Xa uAnastasia esokola ukufumana ukuzibophelela okukhulu kwelakhe icala, UmKristu uya kufikelela ukuba nje ungalahleki. Ke ekugqibeleni banayo yonke into: uthando, uthando kunye namathuba angenasiphelo kwikamva lakho. Kodwa uAna uyazi ukuba olu thando asinto ilula. Kuya kufuneka ufunde ukwabelana ngobomi obutofotofo beGrey kunye nesazisi sakho. Kwaye umKristu kuya kufuneka Yoyisa ukuthanda kwakho izinto Ukunyanzelwa kolawulo njengoko eqhubeka nokulwa needemon zangaphambili. Kodwa uAna uya kuphumelela kwaye siya kuba no ikamva elimnandi leklasi.
Ngaba siya kuyibona?
Los banomdla kwaye bazinikele kwisithandwa Baza kube sele behlela i-meetups kaFebruwari. Kwaye njengaye nawuphi na umfundi olungileyo wothotho lweencwadi ozithandayo, uya kuba njalo imidlalo elindileyo okanye hayi ngale nto uyifundileyo. Uya kukhononda malunga nento egqithileyo okanye into engekhoyo kunye ne-rant malunga ne uninzi lwabachasi abanomsindo, ukuba zikhona kwaye ziya kubakho.
Ngokwenyani, into endiye ndakwazi ukuyibona uninzi lwale saga kukuba akukho mimandla ekwabelwana ngayo phakathi kwabafundi bazinikezela kuSteele noGrey kunye nabo babenyanyayo. Kananjalo ikukuyo ukufaneleka kolu dalo Umbhali waseBritane UEl James. Akazange ashiye nabani na ongenamdla. Sonke siqwalasele isini, imvubu kunye nekinky ejikelezwe yimali kunye nokunethezeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli yothando » Itreyila ye _50 Shadows Freed_. I-cinematographic trilogy iyavala.